Nyefee Okwu: Arsenal, Chelsea na-aga agha maka Isco-teles relay
Emechiri windo mbufe oge oyi, mana ugbu a bụ oge eleba anya n'oge ọkọchị! Lee ndị ọhụrụ asịrị na-agbasa mgbe January 31 n'obi imecha.
AKORKỌ: Ezigbo iji nye aka nyefe Mbappe na ire ere Isco
A na-atụ anya na ndị Arsenal na Chelsea ga-alụ ọgụ n'oge ọkọchị a n'onyinye ha iji weta onye egwu bọọlụ Real Madrid Isco na Premier League na-ekwu Anyanwụ.
Nkwupụta ahụ kwuru na onye isi ala Madrid bụ Florentino Perez nwere otu ebumnuche bụ isi n'oge ọkọchị a na nke a bụ iweta ndị France n'ihu Kylian Mbappe site na PSG ruo Santiago Bernabeu na ọrịre Isco ga-aga ogologo oge maka ịnweta ego mega.
N'ezie kwenyesiri ike na ha nwere ike ịjụ ihe ruru m 65million site na onye na-egwu egwuregwu Spain bụ Isco, onye ghọrọ onye nke abụọ na Zidane nke abụọ na isi ndị isi La Liga.
A na-akọkwa na Manchester City nwere mmasị na njem oge maka Isco, mana ndị mmeri Premier League nwere ọtụtụ ihe ga-echegbu onwe ha mgbe ha nụsịrị mmachibido ha na UEFA na Champions League, na-ahapụrụ ndị klọb London abụọ ahụ ọrụ.
Inter na Napoli malitere ịmalite agha maka Kumbulla
Inter Milan na Napoli setịpụrụ mkpọchi mpi n'ịchụ onye na-agbachitere Verona Marash Kumbulla, ebe onye isi Chelsea Frank Lampard na-enyochakwa afọ 20 ahụ.
Otú ọ dị, football na-akọ na Milan na Napoli na-aga n'ihu Chelsea na usoro ahụ ma malite ịmalite € 20million agha, na akụkọ ihe mere eme na-egosi na Verona na-atụ anya ka ọnụahịa ahụ bilie.
Mba Albanian emeela egwuregwu 19 maka Verona n'oge a, n'oge na-adịbeghị anya na ọgbakọ 2-1 meriri Juventus. Akụkọ ndị gara aga banyere Kumbulla gosiri na Manchester United na Liverpool nwekwara mmasị na nwata ahụ.
- Nleghari mbufe: kwupụtara mmegharị niile
- Kedu mgbe windo mbufe na-emepe?
- Ndi mbufefefe ahia gbara oso
Inter dara Aubameyang ije
Ozi ndị ọzọ si heretali ebe a, na Daily Star na-akọ akụkọ na Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ga-abụ isi ihe mgbaru ọsọ maka Inter ma ọ bụrụ na onye ndu ha Lautaro Martinez nọdu ezumike a.
Barcelona na Real Madrid emeela jikọtara ya na mmegharị nke kpakpando na-arị elu nke Argentina na Star na-ekwu Antonio Conte dị njikere inye Aubameyang ụzọ nke Emirates, ọ bụ ezie na Arsenal na Inter kewara site na ihe dịka m 20million na nyocha mbụ nke mba Gabon.
Ka ọ dị ugbu a, onyeisi ndị isi Mikel Arteta kwuru na ọ chọrọ Aubameyang ịgbatị ọnụnọ ya na Emirates gafere oge ọkọchị 2021.
- Iwu amachibidoro Manchester City na asọmpi European maka oge abụọ emeela ka Chelsea na Manchester United kwuo na ha ga-abanye Jadon Sancho Borussia Dortmund kwuru Daily Star. Sancho, onye batara ozo Dortmund meriri Eintracht Frankfurt 4-0 Na Fraịdee bụ isiokwu nke a ga-ekwe omume £ 120million na-akwado agha n'etiti ọtụtụ klọb ndị dị elu na Europe, ọ bụ ezie na onye ahụ dị afọ iri na ụma chọrọ ịkwaga n'otu ndị tozuru oke igwu egwuregwu asọmpi kachasị. a ma ama na Europe.
- Conte nwere ike ịchụ onwe ya n'àjà Matias Vecino oge ọkọchị a na olile anya na onye ọkpọ egwuregwu Barcelona Arturo Vidal ga-eme mgbanwe na Serie A. football kwuru na onye isi njikwa Inter Milan Beppe Marotta etinyela price 25million price price na 28 afọ, na Chelsea na Everton na-egosi na ha nwere mmasị.
- Onwe ha akụkọ na Chelsea winger Obi o yikarịrị ka ọ ga-anọ na klọb ahụ, n'agbanyeghị Hakim Ziyechabiaru nso na oge oyi. Nkwekọrịta nke onye Brazil na-agwụ na June, nwa okorobịa ahụ nwere afọ 31 gaara enwe mmasị ịnweta mgbakwunye afọ atọ nke nkwekọrịta ya ugbu a na Stamford Bridge.
Nke a bu ụzọ pụta (na Bekee) http://espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4053033/transfer-talk-arsenal-and-chelsea-lead-chase-for-real-madrids-isco
Echegbula onwe gị banyere .ntanetị. Nke a bụ ihe na-egbu ụlọ ahịa. - New York Times